आमिरको ‘महाभारत’ मा सलमानको इन्ट्री ? – Mero Film
आमिरको ‘महाभारत’ मा सलमानको इन्ट्री ?
आमिर खानको द्रेम प्रोजेक्ट फिल्म महाभारतमा सलमान खानले कृष्णको रोल गर्नसक्ने भएका छन् । अमिरले भने कर्णको भूमिका निभाउने पक्का पक्कि नै भएको छ । अहिले सम्म कुनै आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । समाचार श्रोतका अनुसार आमिरले महाभारतमा द्रौपदीको भूमिका दीपिका र सना सेखलाई अप्रोच गरेका थिए । फिल्म द्रौपदीको दृस्टीकोणबाट प्रस्तुत गरिने छ ।
महाभारत आमिरको ड्रीम प्रोजेक्ट रहेको र फिल्ममा ए लिस्टर्सको मात्र कास्ट गर्ने बताइएको छ । फिल्मलाई रिलायन्श इन्डस्ट्रिको मालिक मुकेश अम्बानीले १०० करोडको लगानी गर्ने छन् । यती मात्र होइन मुकेश आमिरको ड्रिम प्रोजेक्ट महाभारतको को प्रड्यूसर पनि हुने भएका छन् । मुकेशले हालै इरोज इन्टरनेसनल र एकता कपूरको प्रोडक्सन बालजीमा पैसा लगानी गरेका छन् । रिपोर्ट अनुसार आमिरको महाभारत एक फिल्म नभएर ५ सिरिज बन्ने बताइएको छ ।
२०७५ जेठ ६ गते ९:२० मा प्रकाशित